केपी ओलीलाई धोका दिएका प्रेम आले र किसान श्रेष्ठ माधव नेपाललाई पनि धोका दिदैं, बनाइसके यतिसम्मको प्लान ! – GALAXY
केपी ओलीलाई धोका दिएका प्रेम आले र किसान श्रेष्ठ माधव नेपाललाई पनि धोका दिदैं, बनाइसके यतिसम्मको प्लान !
नेकपा एमालेलाई धोका दिएका प्रेम आले र किसान श्रेष्ठले माधव कुमार नेपाललाई पनि धोका दिने तयारीमा छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो तनावमा छन् । उनलाई सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउन नसकेपछि तनाव थपिएको हो ।
अध्यादेश सक्रिय भइरहे नेपाली काँग्रेसलाई पनि डर छ । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा रहेको काँग्रेसमा एक्कासी बढ्न सक्ने असन्तुष्टिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ ।